Mitombo Ny Ahiahy Eo Am-piandrasana Ny Didim-pitsarana Ho An’ny Fantsona Fahitalavitra Lehibe Indrindra Ao ZeorZia, · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2017 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, বাংলা, English
Sainam-pirenen'i Zeorzia. Creative commons.
Henjana ny toe-pon'ny vahoaka ao Zeorzia ary indrindra indrindra ny ao an-drenivohitra Tbilissi satria manomana hamoaka ny didim-pitsarana farany ho an'ny Rustavi 2, fantsona lehibe indrindra miara miasa amin'ny antokon'ny mpanohitra UNM manohana ny filoha teo aloha Mikheil Saakashvili ny fitsarana tampony ao amin'ny firenena.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny UNM tsy ao anatin'ny governemanta, dia loharanon'ny tatitra mitsikera momba ireo mpifanandrina amin'ny UNM ao anatin'ny governemanta iaraha-mitantana Nofinofy Zeorziana, tohanan'ny olona manankarena indrindra ao Zeorzia antsoina hoe Bidzina Ivanishvili ny Rustavi 2.
Hita taratra tamin'ny tarehimarika goavana izany – olona teo amin'ny 10.000 teo araka ny fanisana sasany – no nitangorona tao afovoan'i Tbilissi tamin'ny faran'ny herinandro mba hanohitra izay mety ho famindrana ny Rustavi 2 amin'ny tompony vaovao.
An'arivony ireo tonga nivorivory hanohana ny fantsona fahitalavitry ny mpanohitra Rustavi 2.
Efa hatrany amin'ny faramparan'ny taona 2015 fara fahakeliny ny disadisa tamin'ny Rustavi 2 ary tonga amin'ny famaranana ankehitriny.
Araka ny filazan'ny mpanara maso ao Tbilisi DF Watch:
Hanapa-kevitra amin'ny raharaha manokana hanoherana ny Rustavi 2 ny fitsarana fara tampony, fitoriana napetraky ny iray tamin'ireo tompon'ny orinasa taloha, Kibar Khalvashi, izay nilaza fa noterena hiala tsy ho tompon'ny orinasa fahitalavitra izy nandritra ny fiadidian'i Saakashvili. Efa nandresy tamin'ny Fitsarana tao An-tanàna izy sy tao amin'ny Fitsarana Ambony.
Raha mandresy amin'ny raharaha ao amin'ny Fitsarana Tampony ity mpandraharaha ity, izay fitsarana farany amin'ny rafi-pitsaran'ny firenena, handray ny fitantanana ny orinasa izy ary hametraka fitantanana vaovao.
Nampangaina i i Khalvashi ho nanatanteraka ny baiko avy amin'ny manampahefana sy mahazo fanohanana avy amin'izy ireo; ny fandresena amin'ny raharaham-pitsarana dia mety midika fa tsy manana ny fahaleovantenany amin'ny famoahan-dahatsoratra intsony ny Rustavi 2, araka ny filazan'ny UNM sy ny mpanadihady sasany.
Mpanohana mafy ny antokon'i Saakashvili sy ny feo mitsikera ny fanjakana ny Rustavi 2.
Hita ho fitsapana lehibe ho an'ny andrim-panjakana ara-pitsarana ao Zeorzia ny fanapahan-kevitra. Ny firenena Kaokazy Atsimo no demaokratika indrindra ao amin'ny faritra saingy mananontanona amin'ny politikam-pirenena ny fomba fanao taloha nitarazoka indrindra amin'ny didy jadona endrika Sovietika.
Azo antoka fa hamaritra ny ho avin'i Zeorzia izay hahazo an'ny Rustavi 2, tsy afaka mivelona ny demaokrasia raha tsy misy ny fahalalaham-pitenenana
Tsy ireo mpanohana ny UNM ihany no miahiahy momba ny mety ho fahasimban'ny fantsona.
Ny #Media no mpiara-dia voajanahary amin'ny fiarahamonina. Mety ahitana lesoka izy!…Ary aza mba manao fahadisoana mihitsy, izay efa nataon'ny mpifanandrina taminareo. Tohano ny #Rustavi2
Olana lehibe ho amin'ny fahalalahan'ny media tao #Georgia, hanolotra ny Rustavi2 hotantanin'ireo mpomba azy ny fanjakana
Araka ny nomarihana tamin'ny sioka teo ambony, nitsahatra tsy nandefa fandaharana intsony ny Rustavi 2 nandritra ny herinandro mba hanoherana ny disadisa ara-pitsarana ankehitriny sy ny voalaza fa teritery ataon'ny fanjakana ao amin'ny Fitsarana Tampony. Efa nanomboka niasa izy taorian'izany.
Niverina nandefa fandaharana ny #Rustavi2. #Protest fihetsiketsehana ao #Rustaveliave #freedomofpeech #Tbilisi
Mbola tsy fantatra izay fotoana hamoahan'ny fitsarana faratampony ny didiny.
23 ora izayKyrgyzstan